Shabakkado Kumbiyuutaro ah
Internet waa hab aduunka oo dhan u furan iney isu dhaafsadaan ogaalka,wacaasha, cilmiga, ganacsiga iwm. Internet wuxuu ka kooban yahay Shabakadda Kumbuyuutarrada (Ingriis: Computer Network). Kuwaasoo xogta (Ingriis: Data) isu dhaafsada habka loo yaqaan internet protocol. Wuxuuna ka kooban yahey malyuumaad shabakkadood (English: network) sida kuwa jaamacaddaha, ganacsiyada, dowladaha, shirkadaha. Kuwaas oo si wadojir ah isu dhaafsada xog kala duwan oo noocwalba leh sida sawiradda, muuqaalada, codadka, iyo qoraaladda.
Magaca internet wuxuu ka yimid ereyga interconnection network, oo loo soo gaabiyey internet.
Internetku waxow ahaa natiijo ka dhalatay Mashruuc ay sii daysay Hey'ada ARPANET sanadii 1969 kaas oo ahaa mashruuc kasoo baxay wasaarada gaashaandiga Mareekanka barnaamijkaas waxaa loo aasaasay isku xirka Ciidanka Mareykanka iyo jaamacadaha iyo dhamaan hay'adaha cilmi baarista si looga faa'iideysto Aalada mobil Koowda Janaayo ee 1983 ayaa wasaarada Gaashaandhiga Mareekanka badashay Baratakoolkii NCP kuna wareegtay TCP/IP. Shabakada Internetka waxaa
Sida hada ka muuqato Internetku wuxuu yareeyay waxyaabo badan oo ay ku bixi jirtay tamar sida tusaale ahaan waxaa maanta wax ka baran kartaa Internetka adigoo joogo xaafadaada ama gurigaada, Sidoo kale waxaa laga maarmay inaad maanta tegto meel ganacsi oo aad sheey ka iibsato adigoo heli karo dukaameysi Qadka (Online Shopping). Sidoo kale waxaad arkeysaa Shaneemooyinkii in laga maarmay oo Netka aad heli karto Film ama riwaayada aad rabtid. Sida ay leeyihiin Khubarada Aduunka in uu Netka noqon aduunka khiyaaliga ah Tusaale ahaan in qof jooga gurigiisa laga xakumo Maxkamad si Online ah. sidoo kale maanta waxaa laga maarmay in Qaamuusyadii Buugaagtii ha ahaado mid Cilmi iyo mid Taariiqeed marka la fiirsho xaga isku xirka aduunka.
Mareegaha ugu weyn adduunka (1048 luqadood)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet&oldid=227628"